Sat, May 30, 2020 at 7:53am
वासिङ्टन, १६ जेठ। अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सामाजिक सञ्‍जालहरूलाई दिइएको कानुनी सुरक्षा हटाउने उद्देश्यले एक कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन्। उक्त आदेशले फेसबुक र ट्विटरजस्ता कम्पनीविरुद्ध कानुनी कारवाही अगाडि बढाउन सरकारलाई शक्ति दिनेछ। सामाजिक सञ्‍जालहरूलाई ‘अनियन्त्रित शक्ति’ प्राप्त भएको आरोप कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्ने क्रममा लगाएका छन्। तर, उक्त आदेशले कानुनी चुनौतिको सामना गर्नुपर्ने सम्भावना छ। ट्रम्पले लगातार सामाजिक सञ्‍जालहरूमाथि परम्परावादी (कन्जरभेटिभ) आवाजलाई..
काठमाडौं, १५ जेठ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालहरु बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् । ट्वीटरले उनको ट्वीटमा ‘तथ्य जाँच’ राखेपछि आक्रोशित बनेका ट्रम्पले सामाजीक सञ्जालहरू नै बन्द गर्ने चेतावनी दिएका हुन् । उनको उक्त चेतावनीपछि अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय ह्वाइटहाउसले सामाजिक सञ्जाहरूका लागि कार्यकारी आदेश जारी गर्ने तयारी गरेको बीबीसीले जनाएको छ । सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्नका लागि जारी गरिने भनिएको कार्यकारी आदेशको..
काठमाडाैं, १४ जेठ । माइक्रो ब्लगिङ् साइट ट्विटरले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको केही ट्विटहरूमा पहिलोपटक 'फ्याक्ट-चेक' चेतावनी राखिदिएको छ। ट्विटरले मंगलबार ट्रम्पका दुईवटा ट्वीटमा यस्तो चिन्ह लगाएको हो। ट्विटरले ट्रम्पको मेल-मतपत्रलाई 'कपटपूर्ण' भनेको र 'मेलवक्स लुटिनसक्छ' भन्ने चेतावनीको वाक्यांश भएका ट्विटमा चेतावनीको चिन्ह लगाइदिएको हो। ट्विटरको यो कदम ४५ अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनावको ताका ट्विटहरूमा कुनै पनि सामुदायिक निर्देशनहरू लागु नगराउने निर्णय गरेको वर्षौपछि..
काठमाडौं, १४ जेठ । कोरोना भाइरसको संक्रमणले विश्वमा सन्त्रास फैलिइरहँदा अहिलेस्म्म कुनै औषधि वा भ्याक्सिन बनिसकेको छैन । अहिलेसम्म केवल भाइरसबाट बच्ने उपाय मात्र अपनाइएको छ । महामारी रोक्नका लागि भाइरस फैलिन नदिने प्रयास भइरहेको छ । भारतमा यस्तो मेसिन आइपुगेको छ कि जसले कोरोना भाइरसलाई जमीन र हावामा ९९ प्रतिशतसम्म नष्ट गर्न सकिने दावी गरिएको छ । यसलाई बनाउने कम्पनीले एयर..
काठमाडौं, १२ जेठ । भारतीय ह्याकरले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको वेबसाइट आइतबार ह्याक गरेको छ । ह्याकरले ह्याक गरेको केही समयपछि नै प्राधिकरणले पुनः आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याएको थियो । भारत र नेपालबीचको सीमा विवाद र यसले उत्पन्न गराएका विवादपपछि नेपाली ह्याकर र भारतीय ह्याकरबीच साइबर ह्याक गर्ने प्रतिस्पर्धासँगै भारतीय ह्याकरले प्राधिकरणको साइट ह्याक गरेको हो । इन्डियन साइबर ट्रँपस नामको समूहले बाँकेको वन..
काठमाडाैं, १ जेठ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरी एनसेल प्राइभेट लिमिटेडले विद्यार्थीहरूका लागि मोबाइल क्लास डेटा प्याक सार्वजनिक गरेको छ । विश्वव्यापी रुपमा महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोरोनाभाइरस रोग (कोभिड १९) ले निम्त्याएको स्वास्थ्य संकटको अवस्थामा आफ्नो क्याम्पस र कक्षा कोठाबाट टाढा भएका विद्यार्थीहरूले अब अनलाइन सिकाईको माध्यमबाट फाइदा लिन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । लकडाउनले गर्दा घरमा बसिरहेका र उनीहरूको अनलाइन शिक्षाका लागि..
काठमाडाैं, २८ वैशाख। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय निकायलाई ‘जुम मिटिङ सफ्टवेयर’ उपलब्ध गराउने भएको छ। सफ्टवेयरको लाइसेन्स वितरणका लागि मन्त्रालयले परिपत्र जारी गर्दै विवरण माग गरेको छ। मन्त्रालयले सफ्टवेयर प्रयोग गर्ने व्यक्तिको विवरण माग गरेको हो। सरकारलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विकास कार्यक्रम(युएनडिपी)ले जुम मिटिङ सफ्टवेयरको लाइसेन्स सहयोग गरेको हो। अनलाइन बैठक तथा अनलाइन कक्षा संचालनका लागि यसको प्रयोग..
बुधबार, बैशाख २४, २०७७ साल
काठमाण्डौं, २४ वैशाख । ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयअन्तर्गतको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले अब वर्षाको जस्तै चट्याङको पनि पूर्वानुमान गर्ने भएको छ । ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी वर्षातदेखि नै चट्याङको पूर्वामानुमान गर्ने गरी भइरहेको जानकारी दिए । विभागले यअसघि वर्षात, हावाहुरी, बाढी र पहिरो आउने स्थान र समयको पूर्वानुमान गर्र्दै आएको छ । समयमै सही सूचना प्रवाह गर्न..
काठमाडौं, २० वैशाख । चिनियाँ कम्पनी चाइना मोबाइल र हुवावेले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा फाइभ जी इन्टरनेट पुर्‍याएका छन् । सगरमाथाको तिब्बतर्फको पाखोमा पर्ने ६ हजार ५ सय मिटरको उचाइमा चाइना मोबाइल र हुवावे कम्पनीले फाइभ जी इन्टरनेटको बेस स्टेसन निर्माण गरेका हुन् । जुन विश्वको सबैभन्दा अग्लो स्थानको फाइभ जी स्टेसन हो । ६ हजार ५ सय मिटरको उचाइमा गिगाबिट अप्टिकल..
पोखरा, १५ वैशाख। पोखरा महानगरपालिकाले कोरोना रोकथाम र राहतका लागि नगरवासीका गुनासो सुनेर सम्भव भएसम्म तत्काल सम्बोधन गर्न पैसा नलाग्ने हटलाइन नम्बर ११८१ र ११८६ सञ्चालनमा ल्याएको छ । महानगरपालिकाले यही वैशाख ३ गतेदेखि ११८१ नबर सञ्चालन गरेकोमा पुनः अर्को नम्बर ११८६ सोमबारदेखि सञ्चालनमा ल्याएको हो । कोरोना भाइरसको महामारीको समयमा नगरवासीका स्वास्थ्य सम्बन्धी गुनासा, बन्दाबन्दीले जोखिममा परेका समुदायको समस्या एवम्..
काठमाडौं, १० वैशाख। फेसबुकले भारतको रिलायन्स इन्डस्ट्रिजको सहायक कम्पनी जिओ प्लेटफर्ममा ४३ हजार ५७५ करोड भारतीय रूपैयाँ लगानी गर्ने घोषणा गरेको छ। जिओको करीब ९.९९ प्रतिशत शेयर फेसबुकले खरिद गर्न लागेको हो। भारतीय धनाढ्य मुकेश अम्बानीको स्वामित्वमा रहेको रिलायन्स इन्डस्ट्रिजद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा फेसबुकले जिओ प्लेटफर्ममा हुने लगानी सम्बन्धी रिलायन्स इन्डस्ट्रिज, जिओ प्लेटफर्म र फेसबुकबीच सम्झौता भएको उल्लेख छ। जिओ रिलायन्स..
काठमाडौं, ९ बैसाख । के मोवाइलमा पैसा नभएर आवश्यक ठाउँमा पनि फोन गर्न पाइरहनु भएको छैन ? यदि त्यसो हो भने अब चिन्ता नलिए हुने भएको छ । मोबाइलमा पैसा सकिएकाहरुको लागि नेपाल टेलिकमले सित्तैको सेवा उपलब्ध गराउने भएको छ । लकडाउनको कारण रिचार्ज कार्ड किन्न नपाएका या विद्युतीय भुक्तानीमार्फत कुरा गर्न र इन्टरनेट चलाउन नपाएकाहरुलाई टेलिकमले निःशुल्क सेवा दिन लागेको हो..
बिहिवार, चैत्र २७, २०७६ साल
काठमाडौं, २७ चैत । नेपाल टेलिकमले आफ्ना ग्राहकवर्गलाई भ्वाइस तथा डाटा सेवामा उपलब्ध गराएको स्टे कनेक्टेड अफरको अवधि थप गरेको छ । नेपाल सरकारले तेश्रो पटक लकडाउनको समयावधि थप गरेपछि कम्पनीले ग्राहकहरुको सुविधालाई ध्यानमा राखी उक्त अफरको अवधि २७ चैत्र २०७६ बाट ०४ बैशाख २०७७ सम्म बढाएको हो । थप गरिएका यी ८ दिनमा कम्पनीका ग्राहकले यी सुविधा प्राप्त गर्ने..
ट्विटरमा मालिक जैक डोर्सीले कोरोना महामारीसँग लड्न एक अर्ब कोभिड १९ राहत कोषमा दिने घोषणा गरेका छन् । यो उनको कुल सम्पतिको २८ प्रतिशत मात्रै हो । ट्विटरमा सहयोग दिएको घोषणा गर्दै जैकले, ‘आवश्यकता दिनानुदिन बढ्दै गएको छ सहयोग गर्न ढिला नगरु ।’ ‘अमेरिकामा भेन्टिलेटर, पीपीइ लगायत स्वास्थ्य सामाग्रीको अभाव छ साथै व्यवसायी र व्यक्तिहरु आर्थिक रुपमा संघर्षरत छन्’ उनले भनेका छन्..
काठमाडौं, २० चैत । नेपाल टेलिकमले जीएसएम मोबाइल डाटा सेवाको आधारभूत दर (Pay Ps You Go) मा ३० प्रतिशत र सीडीएमए मोबाइल डाटा सेवाको आधारभूत दर (Pay Ps You Go) मा २७ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेको छ । यसभन्दा पहिला २५ प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरे अनुसार कम्पनीले चैत्र २० देखि २६ गतेसम्म (७ दिन) लागू हुने नयाँ छुटको व्यबस्था गरेको..
२ चैत, काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले आफ्ना ग्राहकलाई रिचार्जमा शत प्रतिशत बोनस दिने निर्णय गरेको छ । सरकारले कोरोनाको संक्रम फैलनबाट रोक्ने गरी लकडाउनको लागू गरेपछि धेरै ग्राहकलाई रिचार्ज कार्ड किन्न समस्या परिरहँदा टेलिकमको यस्तो निर्णय आएको हो । रिचार्ज कार्ड प्रयोग गरी रु. ५० र रु. १०० को रिचार्ज गर्दा प्राप्त हुने वोनस रकम २ दिन भित्र खपत गरिसक्नु पर्छ भने..
काठमाडौं । इन्टरनेट सेवाप्रदायकले पैसा भुक्तानी नगरे पनि लकडाउन अवधिभर इन्टरनेट नकाट्ने घोषणा गरेको छ । सेवाको समय सकिए पनि ग्राहकलाई राहत पुग्ने गरि सेवाप्रदायकले यस्तो प्याकेज दिएका हुन् । प्राय घरैबाट सबै कार्यालयको काम गरिरहेको र यस्तो संकटको समयमा इन्टरनेट अवरुद्ध हुँदा ग्राहक सूचनाबाट वञ्चित हुने भन्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायकले सेवा नकाट्ने निर्णय गरेका हुन् । इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघ नेपालका अध्यक्ष..
काठमाण्डौं, १३ चैत । विश्वव्यापी रुपमा महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोरोनाभाइरस रोग (कोभिड १९) ले आफ्नो कार्यस्थल नगई प्रविधिको प्रयोग गर्दै घरबाटै काम गर्न सक्षम हुनुपर्ने नयाँ चुनौती खडा गरेको छ । सञ्चार सेवाको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै एनसेलले सञ्चार सेवाको पहुँचलाइ अझै सरल र सुलभ बनाउँदै ग्राहकका लागि एनसेल सापटी रकममा वृद्घि, निःशुल्क ब्यालेन्स ट्रान्सफर सेवा, रिचार्जमा ५० प्रतिशत बोनस र..
काठमाडौं, १२ चैत । कोरोना भाइरस संक्रमणकाे महामारीलाई रोकथाम गर्न सरकारले लगडाउन गरेपछि विभिन्न कम्पनीहरूले आ-आफ्नो क्षेत्रबाट सेवा दिइरहेका छन् । त्यस्तै मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई भने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नै निर्देशन जारी गर्दै मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीले दिने रिचार्जमा बोनस र सापटी सेवा दायरा वृद्धि गर्न भनेको छ । मोबाइल् प्रदायक कम्पनीहरुले दुई सय रुपैयाँसम्म सापटी दिने प्राधिकरणले भनेको छ। नेपाल..
काठमाडाैं, १२ चैत। ‘तपाईहरु कोही विरामी हुनुहुन्छ भने हामीलाई एककल फोन गर्नुहोस्, हामी तपाईहरुको उपचारका लागि घरमै आउँछौं ।’विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको (कोभिड–१९) कोरोना भाइरस फैलिन नदिन जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले सम्बन्धित गाउँपालिका र नगरपालिकाको एम्बुलेन्सको नम्बर सार्वजनिक गर्दै यस्तो सूचना जारी गरेको छ । कोरोनाको सङ्क्रमण कतै नफैलियोस् र कोही पनि सङ्क्रमित नहोस् भन्नका लागि जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय दैलेखले स्वास्थ्यकर्मीको टोलीसहित घरमै..
काठमाडाैं, १२ चैत। कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) सङ्क्रमणबाट सतर्कता अपनाउन सरकारले मंगलबारदेखि एक हप्तासम्म घरबाहिर ननिस्कन निर्देशन दिएसँगै इन्टरनेटको खपत ह्वात्तै बढेको छ । तत्काल एक हप्तासम्म घरमै बस्न सरकारले गरेको आग्रहको पहिलो दिनमै इन्टरनेटको खपत सामान्य दिनको तुलनामा करिब दोब्बरले बढेको छ । दूरसञ्चार तथा निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवाप्रदायकको सेवा करिब देशैभर विस्तार भइसकेको र घरबाहिर जान नपाउने अवस्थामा इन्टरनेट प्रयोग..
काठमाडौं, ९ चैत । नेपाल टेलिकमले उपलब्ध गराइरहेका वान आवर अनलिमिटेड प्याक, अनलिमिटेड नाइट डाटा प्याक लगायत अफरहरु सस्तोमा प्रयोग गर्न सकिने योजना ल्याएको छ । टेलिकमले जारी गरेको योजनामा वान आवर अनलिमिटेड प्याकमा एक घण्टासम्म डाटा चलाउन, भ्वाइस कल गर्न वा एसएमएस पठाउन सकिन्छ । जम्मा २० रुपैयाँमै यो प्याक उपलब्ध हुनेछ । यसबाट एक घण्टासम्म जति पनि डाटा चलाउन वा..
काठमाडौं, १ चैत्र सामाजिक सेवामा सक्रिय रहने भन्दै माइक्रोसफ्टको बोर्ड अफ डाइरेक्टरबाट बिल गेट्सले राजीनामा दिएका छन्। उनको राजीनामा पछि अब बोर्डमा १२ सदस्य रहने छन्। अब उनी प्राविधिक सल्लाहकारको रुपमा कम्पनीमा रहने बताइएको छ। विश्वका धनी व्यक्ति गेट्सले अब स्वास्थ्य, शिक्षा र जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा बढी काम गर्न चाहेको माइक्रोसफ्टले जनाएको छ। सन् १९७५ मा पाउल एलनसँग मिलेर माइक्रोसफ्ट कम्पनी स्थापना गरेका..
काठमाडाैं, २२ फागुन । सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरले २४ घण्टापछि आफै ट्वीट हराउने नयाँ फिचर सार्वजनिक गर्ने भएकाे छ । ट्वीटरले बुधबारदेखि केही ट्वीटहरु २४ घण्टापछि आफै डिलिट हुने नयाँ ‘फिचर’ परीक्षण गरिरहेको छ । ट्वीटरले सो फिचरलाई ‘फ्लिट्स’ नाम दिएको छ । यो फिचर अन्तर्गत गरिएको ट्वीट फेसबुक, स्न्यापच्याट र इन्स्टाग्राम ‘स्टोरिज’ जस्तै २४ घण्टामा आफै हराउँछ । तर यो फिचरले ट्वीटरलाई अरु सामाजिक..
काठमाडाैं ३ फागुन। नियमित पठनपाठन र शिक्षकको निरन्तरताका लागि बाजुराको जगन्नाथ गाउँपालिकाले विद्यालयमा विद्युतीय हाजिरी जडान गरेको छ । विद्यालयमा शिक्षकको निरन्तरता र विद्यालय समयभित्र अनिवार्य पठनपाठन गराउन गाउँपालिकाले विद्युतीय हाजिरी सञ्चालन गरेको हो ।गाउँपालिकाबाटै निगरानी गर्ने गरी विद्युतीय हाजिरी शुरु गरिएको जगन्नाथ गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनोद गैरेले बताउनुभयो । विद्यालय नियमित सञ्चालन भए नभएको, शिक्षक आए नआएको जस्ता गुनासा सुन्न..
काठमाडाैं, २८ माघ । पछिल्लाे समय पासवर्ड ह्याक भएका धेरै घटनाहरू बाहिर आउने गरेका छन् । अब गुगल माफर्त हामीले आफ्नो पासवर्ड ह्याक भए-नभएकाे पत्ता लगाउन सक्ने भएका छाैं । सुरक्षित इन्टरनेट दिवसको अवसरमा मङ्गलबारका दिन 'फेब्रुवरी ११'मा गुगलले नयाँ सुविधा थपेको छ। यसबाट तपाईंले आफ्नो पासवर्ड ह्याक भएको छ वा छैन भन्ने थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। यसबाहेक गुगलको पासवर्ड चेकअप फिचरले तपाईंले कतिपटक एउटै पासवर्ड..
काठमाण्डौ २७ माघ। नेपाल टेलिकमले विभिन्न प्याकेजसहितको आकर्षक 'विन्टर अफर' ल्याएकाे छ । अफरअन्तर्गतको सेवा कम्पनीको वार्षिकोत्सव (२०७६ माघ २२ गते) देखि नै लागू भइसकेको र आउँदाे चैत ३० गतेसम्म उपयोग गर्न सकिने छ । यसअघि उपलब्ध 'अटम अफर' अन्तर्गतका सेवामा केही सुविधा थप गरेर विन्टर अफर ल्याइएको टेलिकमले जनाएकाे छ । जीएसएम प्रिपेड र पाेस्टपेड तथा सीडीएमए प्रिपेड/पोस्टपेड मोबाइलमा यी अफर प्रयोग गर्न सकिन्छ ।..
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्ले दरखास्त आह्वान गरेकाे छ । परिषद्ले रिक्त रहेका विभिन्न तहमा पदपूर्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरेको हो । हेर्नुहोस् सूचना ..
२१ पुस, काठमाडौं सीजी कम्युनिकेसन्सले मोबाइल प्रयोगकर्ताका लागि विभिन्न आकर्षक योजना सुनाउन थालेको करिब साढे २ वर्ष भयो । तर, आधारभूत टेलिफोन सेवाका लागि (युनिफाइड ) लाइसेन्स नै नपाएपछि सिजीको योजना भने अपुरै छ । नेपाल टेकिलम र एनसेलको सीमित प्रतिस्पर्धाको बजारमा आफू पनि आउने र भारतमा जीओले जस्तै ‘क्रान्ति’ गर्ने सिजीको घोषणा अहिलेसम्म लाइसेन्स नपाएकै कारण कागजमा सीमित भएको छ..
काठमाडौं, २२ माघ फेब्रुअरी ४ अर्थात् मंगलबार फेसबुक १६ वर्ष पुगेको छ। सन् २००४मा स्थापना भएको फेसबुकले छोटै समयमा विश्वभरीका अधिकांश मानिसहरुलाई जेडेको छ। फेसबुकले भौतिक रुपमा टाढा रहेका आफ्ना आफन्तसँग भर्चुअल रुपमा भेट्न मात्रै सजिलो बनाएन, यसले जीवनका महत्वपुर्ण घटनाहरुलाई पनि कैद गरेर राख्न र सबैलाई देखाउन समेत सहयोग गर्यो। मानिसका दैनिक कृयाकलाप र इतिहासलाई समेत कैद गर्न सहयोग गरेको छ। अहिले..
Results 780: You are at page 1 of 26